युट्युबमा हेर्न सकिने १० राम्रा नेपाली फिल्म :: Setopati
युट्युबमा हेर्न सकिने १० राम्रा नेपाली फिल्म
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज २७
फिल्म हेर्न युट्युबजति सजिलो माध्यम अर्को कुन होला र!
युट्युबमा कुन फिल्म छ-छैन भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्छ।
नेपाली फिल्म रुचाउने दर्शकका लागि दसैंमा यहाँ युट्युबमा भएका यी फिल्म हेर्न रमाइलो हुन सक्छ।
तनावरहित बस्नुपर्ने यो समयमा हास्यप्रधान फिल्म 'लाफिङ थेरापी' बन्न सक्छ। जात्रा त्यस्तै फिल्म हो।
नेपाली सिनेमाको कथ्यशैली बलिउडभन्दा फरक हुनुपर्ने र यसको कथा नेपाली समाज र संस्कृतिबाटै आउनुपर्ने मत राख्नेमध्येका अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो, नवीन सुब्बा।
उनै नवीनले नुमाफुङ निर्देशन गरेर नेपाली मौलिक कथा टिपेर सिनेमा बनाएको जस पनि बटुल्न सफल भए। नुमाफुङलाई धेरैले नेपाली सिनेमाको धार बदल्नेमध्येको प्रमुख सिनेमा मानेका छन्। नुमाफङ अर्थात् सुन्दर फूल। लिम्बू संस्कृति र मुन्धुममा फूलको महिमा अपार छ। नवीनले आफ्नो सिनेमामा त्यही नाम टिपे।
लिम्बू समुदायमा प्रचलित छोरी दिँदा कुटुम्बसँग नगद, सुन आदि लिने चलन सुनौली–रूपौली प्रथा र त्यसले निम्त्याउने अप्ठ्यारोलाई कथा बनाए। फिल्मको कथा जुन समाजबाट लिइन्छ, कथा भन्ने शैली पनि त्यही समाजको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नवीनको यो फिल्मले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा सहभागी भएर प्रशंसा र पुरस्कार जितेको छ।
अनुपमा सुब्बा, निवाहाङमा लिम्बू, प्रेम सुब्बा, अलोक नेम्बाङ आदि यसका मुख्य कलाकार हुन्।
शुशांक मैनाली, दिया मास्के, अरुणा कार्की र दयाहाङ राईको मुख्य भूमिका रहेको साँघुरोलाई नेपाली सिनेमाको दायरा फराकिलो बनाउने फिल्म मानिन्छ।
सुकुम्बासी बस्तीको गरिब दम्पत्तीले भोग्नुपरेको समस्या नै फिल्मको मुख्य विषयवस्तु हो। यौन मनोविज्ञानमा आधारित साँघुरोमा सहरी गरिब परिवारको कथा छ। के सपना अनि के विपना! फिल्मको नामजस्तै उनीहरू खुम्चिएका छन्।
सुकुम्बासी बस्तीको एउटा छाप्रोभित्र दुःखसुख जिन्दगी कटाइरहेका आमा र छोरा छन्। हकर काम गर्ने कृष्ण र उनले पत्रिका पुर्याउन जाने एक जना ग्राहकको घरमा काम गर्ने कमलाबीच प्रेम बसेपछि बिहे हुन्छ। बिहेपछि शारीरिक सम्बन्ध राख्न उनीहरूका लागि परिस्थिति अनुकूल हुँदैन। कृष्णकी आमा र यो जोडी बस्ने कोठा एउटै छ। उनीहरूका लागि आमाको उपस्थिति बाधक बन्दै जान्छ र कथाले नयाँ मोड लिन्छ।
सानो कथा सानै परिवेश, मानवीय कुण्ठा र मनोविज्ञानको सूक्ष्म चित्रण साँघुरोको सबल पक्ष हो। जोयस पाण्डेले निर्देशन गरेको फिल्मका लेखक विनोद पौडेल हुन्।
सुनगाभा केटी-केटीबीचको प्रेमकथा हो। यसमा दिया मास्के र निशा अधिकारी मुख्य भूमिकामा छन्। दिया परम्परागत नेवार परिवार र निशा आधुनिक देखिने परिवारमा हुर्केका हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो प्रेममा समर्पित छन् तर परिवार र समाजले नबुझ्दा उनीहरूको सम्बन्ध जोखिममा पर्दै जान्छ।
नृत्य शिक्षिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी दिया मास्केको सशक्त अभिनय रहेको सुनगाभामा निशाको अभिनयमा सहजता भेटिन्छ। निर्देशक सुवर्ण थापाको यो फिल्म पनि विदेशी महोत्सवमा चर्चा पाउन सफल भएको थियो। यसमा सौगात मल्ल निशा अधिकारीका दाइको भूमिकामा छन्।
विपीन कार्की, सुरक्षा पन्त र बर्षा राउतको मुख्य भूमिका भएको गोपी पनि विषयका हिसाबले नयाँपन थप्ने अर्को नेपाली फिल्म हो।
हरेक सिनेमामा फरक देखिने विपीन कार्कीले यसमा गाईपालकको भूमिका सुहाउँदो देखिन प्रशस्त मेहनत गरेका छन्। गोपीले विदेशको मोह त्यागेर नेपालमै गाई पालेर जीविका चलाउन चाहने युवाको प्रयत्नको कथा भनेको छ। नेपालमा गाईपालनको अवस्था, दूधको बजार, किसान र उपभोक्ताका समस्या र सरकारी नीतिसम्मका प्रसंगलाई छोएको छ।
दीपेन्द्र के खनालको निर्देशन र खगेन्द्र लामिछानेको मुख्य अभिनयको पशुपतिप्रसाद धेरैले रुचाएको फिल्म हो।
गाउँबाट सहर पसेर हराउने युवा सपनाको कथालाई मौलिक र जीवन्त रूपमा देखाइएको पशुपतिप्रसाद नामजस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर परिवेशमा खिचिएको फिल्म हो। पशुपति क्षेत्रलाई दृश्यमा उतार्ने काम मात्र नगरेर त्यहाँको घाटे, जोगी, वृद्धवृद्धादेखि तस्करीसम्मका विषयलाई फिल्मको कथामा जोडिएको छ।
भुइँचालोमा धेरैले धेरै कुरा गुमाए। पशुपतिप्रसाद भुइँचालोमा घर र आमाबा गुमाएर गाउँबाट काठमाडौं आएको पात्र हो। साहुको ऋणको भारी बोकेको पशुपतिप्रसाद आर्यघाटमा लास जलाएर बचेको मुढा ओसार्ने कामदेखि ठेलामा समोसा बेच्ने कामसम्म गर्न तयार छ। तर उसको दुःख घट्दैन। बढ्दै बढ्दै एउटा उत्कर्षमा पुगेर चुँडिन्छ।
मुख्यपात्रसँगै यसका हनुमानजी र भस्मे पात्र उत्तिकै चर्चित छन्।
राम्रो साहित्यिक कृति रोज्दैमा राम्रो फिल्म बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। बरू धेरै राम्रा साहित्यिक कृति फिल्म बन्ने क्रममा मरेका छन्। बासुदेव ती थोरै राम्रा फिल्ममा पर्छ, जसले मूल कृतिको मर्मलाई बचाउन सफल भयो।
रंगमञ्चका धुरन्धर अभिनेता हरिहर शर्माको मुख्य भूमिका रहेको बासुदेव ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास 'कट्टेल सरको चोटपटक' को कथालाई फिल्ममा ढालिएको हो। आदर्श शिक्षक र धनसम्पत्तिका लागि जेसुकै गर्ने मित्रको द्वन्द्वमार्फत् बासुदेवले समाजमा गहिरिँदै गएको नैतिक संकटबारे प्रश्न उठाएको छ।
नीर शाहको निर्देशन रहेको 'बासुदेव'मा उनीबाहेक हरिहर शर्मा, शकुन्तला शर्मा, कृष्ण मल्ल र शर्मिला मल्लको प्रमुख भूमिका छ।
त्रिकोणात्मक प्रेम कथा कबड्डी मुस्ताङको सुन्दर परिवेशमा खिचिएको छ। मैंया (रिश्मा गुरूङ) लाई फकाउन काजी (दयाहाङ राई) र विवेक (सौगात मल्ल)बीच हुने हानथाप नै फिल्मको रमाइलो पक्ष हो।
फिल्मको कथाले मुस्ताङको परिवेशसँगै थकाली परम्परा र स्थानीय राजनीतिलाई समेत जोड्दै लान्छ। मुख्यपात्र बाहेक कबड्डीमा विजय बराल, बुद्धि तामाङजस्ता कलाकारको उपस्थितिले पनि फिल्मलाई रोचक बनाएको छ।
टलकजंग भर्सेज टुल्केः
विश्वप्रसिद्ध चिनियाँ लेखक लु शुनको ‘आह क्यूको साँचो कथा’ लाई आधार बनाएर नेपालीमा अनुप बरालको निर्देशनमा टलकजंग भर्सेस टुल्के नाटक मञ्चन भएको थियो। त्यही नाटकलाई पछि निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरे।
टलकजंग अर्थात टुल्के भूमिका खगेन्द्र लामिछानेले निर्वाह गरेको यो फिल्ममा रवीन्द्रसिंह बानियाँ, ऋचा शर्मा र दयाहाङ राईको मुख्य अभिनय छ।
यसको कथा वर्गसंघर्ष र माओवादी आन्दोलनको सेरोफेरोमा बुनिएको छ। शोषण, जालझेल, प्रतिशोध र विद्रोहका तहहरु पत्रपत्रमा खुल्ने यो फिल्म आत्मसम्मान चाहने युवाको कथा हो।
सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, कर्मा, ऋचा शर्मालगायत मल्टिस्टार लुटले नेपाली फिल्ममा सुकेको बजार मात्रै उकासेन, फिल्मको ट्रेन्ड नै बदलिदियो। लुट युवा पुस्ताको नयाँ सोचको प्रतिनिधि फिल्म बन्न पुग्यो।
लुटको कथा हाकु कालेको बैंक लुट्ने मास्टरप्लान पूरा गर्ने प्रयाससँगै अघि बढ्छ। सौगात मल्लले निर्वाह गरेको हाकु कालेको भूमिका नेपाली फिल्मको सर्वकालीन यादगार पात्र हो। निर्देशक निश्चल बस्नेतको यो फिल्मले बेरोजगार सहरी युवा र पैसा कमाउने दबाबमा उनीहरूले अपनाउने आपराधिक गतिविधिको कथा भन्छ।
कथाभन्दा प्रस्तुतिका कारण रुचाइएको लुटको पटकथा, संवाद र अभिनयका कारण प्रशंसा कमाएको फिल्म हो। यसमा काठमाडौंका गल्लीदेखि भट्टीसम्मका दृश्यलाई सुन्दर ढंगले खिचिएको छ।
यो सूचीमा परेका फिल्म प्रतिनिधि नाम हुन्, जसले विषय वा प्रस्तुतिका हिसाबले नयाँपन दिन सफल भए। यीबाहेक पनि युट्युबमा पुरानाे डुंगा, बधशाला, फिटकीरी, सानाे संसार, चपली हाइट, प्रेमपिण्ड, बसन्तीजस्ता धेरै फिल्म पाइन्छ जुन यो समयका लागि राम्रो खुराक बन्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २७, २०७८, १३:००:००